Qaramada Midoobay oo sheegtay in 1.5 Bilyan oo carruur ah Waxbarasho ku waayeen Covid-19. - XAL DOON
Home NEWS Qaramada Midoobay oo sheegtay in 1.5 Bilyan oo carruur ah Waxbarasho ku...
Qaramada Midoobay oo sheegtay in 1.5 Bilyan oo carruur ah Waxbarasho ku waayeen Covid-19.
Paloma Escudero Agaasimaha Xiriirka ee Sanduuqa Carruurta u qaabilsan Qaramada Midoobay ee UNICEF ayaa sheegtay in Xayiraadda Covid-19 ee Goobaha Waxbarashada saameyn taban ku reebtay 1.5 Bilyan oo Caruur guud ahaan Caalamka.
Labada sano ee kasoo wareegtay soo ifbixidda Covid-19 waxaa carruurtaan ay gafeen waxbarashada maadaama lagu celiyay Guryahooda kaddib markii la xiray Goobaha ay wax ku baranayeen sida ay hadalka u dhigtay Agaasime maadaama ay ka duwan yihiin Dadka waaweyn oo Duruustooda kusii qaatay muuqaalka fogaan-aragga.
Paloma Escudero oo ah Madaxa Xiriirka Caalamiga ee UNICEF waxa ay sheegtay in loo baahan yahay taageero loo muujiyo Carruurta si ay u helaan Macalimiin diiradda saara sidii ay wax u baraan Carruurtaan oo gaabis ku yimid Waxbarashadooda.
“Faafida COVID-19 waxay carqaladaysay waxbarashada in ka badan 1.5 bilyan oo carruur ah labadii sano ee la soo dhaafay. Si dugsiyada loo furo oo loo taageero Barayaasha & qoysaska dhalay carruurtaas waa Dal weliba mudnaanta koowaad uu ka dhigaa arrintaan” ayay tiri Paloma Escudero.
Goobaha Waxbarashada la xiray ayaa diyaariyay qorshe daraasadda ay Ardaydu ugu qaadanayaan Muuqaalka Fogaan-Aragga balse fursaddaan waxaa ka faaiideystay Dadka waaweyn halka Carruurta ay waayeen Waxbarashadooda.
Xayiraadda Covid-19 oo inta badan dalalka Caalamka ay qaadeen ayaa si rasmi ah loo furin Goobaha Waxbarashada maadaama Cabsida taagan ay tahay in soo laba-kacleynta noocyada Covid-19 uu halis gelin karo Nolosha Dad horleh.
Qaramada Midoobay ayaa u dabbaaldegeysa “Maalinta Waxbarashada” oo ay u asteesay 24ka Janaayo oo sanad weliba la maamuuso, maalintaan waxaa lagu soo bandhigaa heerka Waxbarashada, caqabadaha taagan & sida loo xalin karo.